राती सुत्दा सिरानी मुनि तुलसीको पात राख्दाको लाभ !!! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/राती सुत्दा सिरानी मुनि तुलसीको पात राख्दाको लाभ !!!
राती सुत्दा सिरानी मुनि तुलसीको पात राख्दाको लाभ !!!
विज्ञानमा तुलसीको जबरजस्त फाइदाको धेरै व्याख्या गरिरहेको छ । तुलसी एक धेरै असरदार औषधी हो जसको एक होइन धेरै फाइदा छन् । तुलसीले चिसो, रुघा खोकी र सास सम्बन्धि रागेको साथै यौन रोगलाई पनि धेरै फाइदा पुर्यायछ । यी बाहेक अन्य पनि धेरै छन् तुलसीका फाइदा । आज हामी यसको बारेमा चर्चा गर्छौ ।
राति सुत्ने समयमा सिरानी मुनि तुलसीको पाँच पात राखेमा तपाइँको जीवनमा धेरै परिर्वतन आउन सक्छ । रातको समय सिरानी मुनि राखेको पाँच पातले दिनभरको तनावलाई हटाउँछ । यसको साथै दिमागले पनि शान्त भएर काम गर्छ । यस्तो गर्दा तपाइँ भित्र भएको नकरात्मक शक्ति हटाउँछ र यसो गर्दा व्यापारमा पनि धेरै बढोत्तरी हुन्छ ।
तुलसीको रुख नजिक बत्ती बाल्दा तपाईँको मनोकामना पुरा हुन्छ । यसको साथै यदि गहुँको पीठो पिस्नु भन्दा अगाडी नै तुलसीको ११ वटा पात शनिवार मिसाउँदा धेरै लाभ हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् :मेवा मात्र होइन यसको दाना पनि हुन्छ स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त लाभदायक ! कसरी प्रयोग गर्ने ?:मेवा प्राय: सबै मानिसलाई मन पर्ने फल हो। मेवामा भरपूर मात्रामा आइरन, क्याल्सियम र म्याग्नीशियम हुन्छ जसले हाम्रो शरीर स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ। हाम्रो स्वास्थ्यको लागि केवल मेवा मात्र फाइदाजनक छैन तर यसको दाना पनि निकै लाभदायक मानिन्छ। मेवाको दानाको सेवनले धेरै रोगहरू हटाउन सकिन्छ। आज हामी तपाईंलाई मेवाको दानाका फाइदाहरूको बारेमा बताउन गइरहेका छौं …
मेवाको दानामा एन्टिअक्सीडेन्टहरू पाइन्छन् जसको सेवनले चिसो, रुघा, खोकी जस्ता संक्रमणहरूबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ।मेवाको दाना कलेजोको लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ। यदि तपाईले मेवाको दानाको सेवन गर्नुभयो भने कलेजो सम्बन्धि समस्याले कहिल्यै सताउँदैन।
साथै, जो मानिस कलेजोको समस्याबाट पीडित छन्, तिनीहरूले दैनिक रूपमा बिहान खाली पेटमा मेवाको दाना सेवन गर्नुहोस्।मेवाको दाना खाँदा रक्तचाप नियन्त्रणमा रहन्छ। यस्तो अवस्थामा उच्च रक्तचापका बिरामीहरूले मेवाको दानाको सेवन गर्नुहोस्। मेवाको दाना स्वास्थ्यको लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ।हृदय रोगीहरुले नियमित मेवाको दाना सेवन गर्नु लाभदायक हुन्छ। किनभने मेवाको दाना मुटुको लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ
यिनै हुन जहाज दुर्घटना स्थलमा सरकार भन्दा पहिला पुग्ने ब्यक्ति
भिडियोकस्तो अचम्म ! कुखुराको भाले मर्दा यसरी गरियो दाहसंस्कार, गरियो काजकिरिया (हेर्नुस् भिडियो )
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको साढे २ करोड डोज खोप नेपाल आउने खबरको वास्तविकता
माङसेबुङ ६ चिसापानीमा भिषण पहिरो ४ ज,नाको मृxत्यु।